Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1212 tal
Lesona 12 : Ny antiKristy
15 - 21 Septambra 2012
Ilay misakana (2Tes.2:5-7)
Talata 18 Sept.
Araka ny voalazan’i Paoly, inona ireo zavatra roa nampiavaka ny toe-javatra nisy teo amin’izao tontolo izao tamin’ny fotoana nanoratany? Ahoana no fahitantsika ny ady ifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara araka izay ambara amintsika ao amin’ireo andininy ireo? 2 Tes. 2:6, 7.
Raha akambana amin’ireo efa hita terỳ aloha ireo andininy ireo, dia hitantsika fa dingana telo eo amin’ny tantara no asongadin’i Paoly, manomboka amin’ny fotoan’androny ary mipaka hatrany amin’ny andro farany. Miantomboka amin’ny Fiavian’i Kristy fanindroany ny dingana farany. Mialoha io dingana io kosa ny fanambarana ny amin’ilay lehilahin’ota (2 Tes. 2:3), izay fantatra ihany koa amin’ny anarana hoe mpandika lalàna (2 Tes. 2:8). Ary mialoha io dingana io indray ny fotoan’ny zava-miafina sy ny misakana (2 Tes. 2:6, 7).
Irintsika fatratra ny hahatakatra amin’ny fomba feno ny tian’i Paoly hambara eto, kanefa maro ireo zavatra mbola miteraka ahiahy ao amin’ireo andininy ireo. Tsy voafaritra ho lahy na vavy (izany hoe zavatra) ilay zavatra misakana ao amin’ny and. 6, kanefa voafaritra ho lahy (izany hoe olona) izany ao amin’ny and. 7. Ilay mpandika lalàna (izany hoe lehilahy, and. 8) dia tsy voafaritra ho lahy na vavy ao amin’ny and. 7 (“ny zava-miafina, dia ny tsy fankatoavan-dalàna”), tsy fantatra mazava ihany koa (and. 7) raha nesorina ilay zavatra misakana na nanana fahefana hanaisotra ny tenany (ny dikan-teny ESV no mahalaza azy araka ny tokony ho izy -“mandra-pialany eo”).
Iza ilay misakana na fahefana misakana ao amin’ireo andininy ireo? Nisy tamin’ny andron’i Paoly izany; nanandratra ny lalàna izy (fahefana izay nisakana ny tsy fankatoavan-dalàna, and. 7); teo am-panatanterahana iraka avy amin’Andriamanitra izy; ary manan-kery lehibe hanakana ny fiasan’i Satana izy (and. 9).
Araka ny voalazan’ireo andalan-teny hafa ao amin’ny Testamenta Vaovao, dia inona no misakana ny Fiavian’i Kristy fanindroany? Mat. 24:14; Mar. 13:10; Apôk. 14:6, 7.
Faritra maro ao amin’ny Testamenta Vaovao no ahitana fa ireo toe-javatra miseho mialoha ny Fiavian’i Kristy fanindroany dia aorian’ny fitoriana farany ny filazantsara (Mat. 24:14; Mar. 13:10; Apôk. 14:6, 7). Eo amin’io tranga io àry izany, dia mety ho Andriamanitra mihitsy no Ilay misakana resahin’i Paoly eto, Izay mihazona ny toejavatra farany tsy hitranga mandra-pandren’ny olona rehetra ny filazantsara.
Fanakanana tahaka ny ahoana no ilainao eo amin’ny fiainanao? Izany hoe, rehefa tojo fakam-panahy ianao, ahoana no ianaranao mitaky ny herin’Andriamanitra hisakana anao tsy hanao izay fantatrao fa tsy mety?